'म उता आबुधाबीमा, यता घरमा बूढीआमै, श्रीमती र बच्चाबच्ची मात्र थिए, डोजर चल्यो' :: Setopati
युनिक श्रेष्ठ काठमाडौं, फागुन १९
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, फागुन १९
मंगलबार हिरासतमुक्त भएपछि सञ्जय तामाङ (दायाँ) र उनको घर (सेतो रङको) मा डोजर चल्दै गर्दाको तस्बिर।
बालाजुका सडक-पीडितहरूको कथा
एक साताअघि बालाजु बाइपासबाट पक्राउ परेर मंगलबार सर्वोच्च अदालतले रिहा गरेका आठ जना अभियन्तामध्ये सञ्जय तामाङ पनि एक हुन्।
बाइपासको जुन ठाउँमा सञ्जयको घर थियो, त्यहाँ अहिले फराकिलो बाटो बनेको छ। उनीजस्तै ३९ घरपरिवार विस्थापित भएका छन्।
विकासका नाममा घरजग्गा गुमाएका सञ्जयले न्यायको आश मारिसकेका थिए। पछिल्लो समय भूमि अतिक्रमणविरूद्ध आन्दोलनले जसरी उपत्यकाव्यापी रूप लिँदैछ, त्यसले उनी आशावादी बनेका छन्।
आन्दोलनको लहरले राज्यबाट खोसिएको अधिकार र गुमेको घरजग्गा फिर्ता होला भन्ने आशा पलाउन थालेको उनी बताउँछन्।
'हामीले भूमि अतिक्रमणविरूद्ध आन्दोलनमा उपत्यकाभरिबाट अभूतपूर्व समर्थन पाएका छौं। कुना-कुनाका मान्छे आफू पनि यस्तै अतिक्रमणमा परेको भन्दै आन्दोलनमा जोडिन थालेका छन्,' उनले बुधबार सेतोपाटीसँग भने, 'काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट एउटै आवाज उठिरहेको छ। यसले मलाई आफ्नो जग्गा फिर्ता होला कि भन्ने आशा पलाएको छ।'
उनले अगाडि भने, 'अहिलेसम्म उपत्यकाका विभिन्न ठाउँका मान्छे आ-आफ्नो स्थानमा छरिएर आन्दोलन गर्दै थिए। मागहरू छरिएका थिए। छरिएका माग डोजरको चर्को आवाजमुनि दबिएका थिए। अब हाम्रो आन्दोलन एकीकृत हुँदै गएको छ। यसले हाम्रो शक्ति बलियो हुँदै छ। हामीले सबैको साथ र सहयोग पाएका छौं। यसपालि राज्यलाई हाम्रो आवाज नसुनी धर छैन।'
बालाजुको विरोध प्रदर्शन चर्किँदै गएपछि स्थानीयले गत बुधबार त्यहाँ बन्दै गरेको सूचना केन्द्रको बार भत्काइदिएका थिए। त्यही कारणले उनीसहित मीनबहादुर शाही, महेश्वर मानन्धर, दिपेन श्रेष्ठ, भीमदेव श्रेष्ठ र रूक्षित श्रेष्ठ गरी छ जना पक्राउ परे।
पक्राउ परेका अभियन्ताको सन्चो-बिसन्चो सोध्न जाँदा नेपाल भाषामा कुराकानी गरेको भन्दै उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन सायमि र विरोचन श्रेष्ठलाई पनि प्रहरीले थुन्यो।
यी आठ जनामध्ये सञ्जयबाहेक सबै नेवा: समुदायका हुन्। उनीहरू एकअर्कासँग नेपाल भाषामै कुरा गर्थे। यसले आफूलाई कुनै अप्ठ्यारो नभएको सञ्जय बताउँछन्। बालाजुमै जन्मेहुर्केका उनी आफैं पनि नेपाल भाषा राम्ररी बुझ्छन्।
'मेरो परिवार हजुरबुवाको पालामा धादिङबाट काठमाडौं बसाइँ सरेको हो,' ४३ वर्षीय सञ्जयले भने, 'म त्यहाँ कहिल्यै गएको छैन। म यही ठाउँमा जन्मे-हुर्केको हुँ। त्यसैले नेवा: भाषा राम्ररी बुझ्छु।'
सञ्जयको घर २०७१ सालमा सडक विस्तारको शिकार भएको थियो। उनले आफ्नो घरमा डोजर चलाइएको आफ्नै आँखाले देख्न पाएनन्। उनी त्यति बेला वैदेशिक रोजगारका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्सको आबुधाबीमा थिए। उनकी श्रीमती, छोराछोरी र बूढीआमा मात्र हुँदा डोजर आतंक मच्चिएको उनी बताउँछन्।
दस वर्ष आबुधाबी काम गरेर दुई वर्षअघि नेपाल फर्किएका सञ्जय भन्छन्, 'म आउँदा त घर भएको ठाउँ उजाड थियो। राज्यबाट छत खोसिएपछि मेरो परिवार डेरामा बस्न थालेको थियो। मैले अरूले जस्तो विरोध गर्न पाइनँ। परिवारलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने नै मेरो ध्याउन्न भयो।'
बीचमा 'मेरो भाषा बोल्दा रोक्ने तिमी जातिवादी तानाशाह हो' लेखिएको ब्यानर बोकेका सञ्जय तामाङ। तस्बिर: नारायण महर्जन/सेतोपाटी
सरकारले घर भत्काएको मुआब्जासमेत नदिएको उनको भनाइ छ। अहिले उनी आबुधाबीबाट कमाएर ल्याएको पैसाले सानोतिनो व्यापार गरी गुजारा चलाइरहेका छन्।
'बूढी आमै, श्रीमती र साना बच्चाबच्ची मात्र भएका बेला एक्कासि डोजरले घर भत्काउन आउँदा कति आतंकित भए होलान्!' सञ्जयले भने, 'उनीहरू न बाझ्न सक्थे, न आफूसँग भएका कागजपत्र देखाउन सक्थे। हुन त कागजपत्र देखाउनेहरूको घर पनि कहाँ जोगियो र! भुइँचालोजस्तै एक्कासि आएको आतंकबाट त्रसित उनीहरू रातारात डेरा सर्न बाध्य भए।'
ती दिनमा घर भत्किएको खबर पाउनेबित्तिकै उनी तुरून्तै नेपाल फर्कन चाहन्थे। तर, भन्नासाथ विदा नपाएपछि मुटु बाँधेर उतै बसे र यता बिचल्लीमा परेका जहान-छोराछोरीलाई फोनमा हौसला दिन थाले।
अहिले सञ्जयको परिवार तार्केश्वर नगरपालिकाको गोलढुंगामा बस्छ।
बाइपासका घर भत्काउँदा सरकारले स्थानीयहरूबीच नै फाटो ल्याएको र त्यसैमा राजनीति खेलेको उनी बताउँछन्।
'एकैचोटि सबैका घर भत्काउँदा ठूलो विरोध होला भनेर छुट्टाछुट्टै भत्काए। पहिले माथिल्ला १८ घर भत्काए। माथिका घर मात्र भत्काउँदा तलका घरवालालाई आफू जोगिने भयो भन्ने लाग्यो। त्यसपछि विस्तारै तल्ला घरहरू पनि भत्काउँदै गए,' उनले भने।
एक साता हिरासतमा बसेर मंगलबार मुक्त भएपछि उनी अन्य अभियन्ताहरूसहित इन्द्रचोकको मैनबत्ती र्‍यालीमा सहभागी भएर राति आफ्नो घर जाँदा फूलामाला र खादाले स्वागत गरिएको थियो। उनलाई सामुन्ने देखेर श्रीमती, आमा र छोराछोरीको आँसु थामिएको थिएन।
'घरमा मेरो स्वागत आँसुले भयो। केही खुसीको आँसुले, थोरै पीडाको आँसुले। त्यो आँसुमा सात दिनको अन्यौल र अनिश्चयको पीडा थियो,' उनले भने।
खुसीको कारण चाहिँ उनी हिरासतमुक्त हुनु मात्र होइन, सञ्जयले भनेजस्तै आन्दोलनले बृहत् रूप लिनु पनि हो।
यसबीच बुधबारै नेवा: दे दबुमा बाइपासका सडक विस्तार पीडित र अभियन्ताहरूको छलफल भयो। उनीहरूले उपत्यकाव्यापी बृहत् सडक विस्तार आन्दोलनलाई बालाजु बाइपासमा केन्द्रित गर्ने भएका छन्। उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट सडक विस्तार पीडितहरूलाई बाइपासमा गाेलबद्ध गराएर बृहत् कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन सायमिले बताए।
‘जुन ठाउँमा पीडा भएको छ, अब त्यही ठाउँमा आन्दोलन केन्द्रित गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने।
मंगलबार हिरासतमुक्त भएका सायमि भोलिपल्टै बाइपासका पीडितलाई भेट्न गएका थिए। त्यहाँ पीडित परिवारसँग छलफल गरेपछि एकअर्काको आडभरोसा र आफ्नो हक-अधिकारका लागि लड्ने हिम्मत जुटेको उनले बताए।
हिरासतबाट छुटेर सुमन सायमिले छोरीहरूलाई अँगाल्दै भने- राम्रो काममा हतकडी लगाएको, डराउनुपर्दैन
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन २०, २०७७, ०९:४५:००